नेपालीहरुको प्रतिष्ठासंग गाँसिएको चलचित्र हो ‘ बुद्ध बर्न इन नेपाल’
काठमाडौं,७ जेठ । अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीले निर्माण गरेको चलचित्र ‘बुद्ध वर्न इन नेपाल’ जेठ ७ आजदेखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदै छ । अहिले त्यही चलचित्रका बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले विभिन्न कार्यहरु गरिरहेका छौं । त्यस्तै एनआरएनको सहयोगमा अमेरिका , क्यानाडा लगायतका देशहरुमा देखाउने पनि तयारी गरिरहेका छौ । कसरी सोच आयोे, चलचित्र […]
क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा बलिउड फिल्मको प्रदर्शन र कलाकारहरुको उपस्थिति
बर्सेनी फ्रान्समा आयोजना हुने क्यान्स फिल्म फेस्टिभललाई संसारकै सबभन्दा ठूलो फिल्म महोत्सव मानिन्छ । यो वर्ष पनि केही दिनअघि यो महोत्सव सुरु भएको छ । संसारभरका विभिन्न भाषामा बनेका फिल्महरुबीच महोत्सवमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो महोत्सवमा अवार्ड नजिते पनि पछिल्लो सयम बलिउड फिल्मको प्रदर्शन र कलाकारहरुको उपस्थिति भने बढेको छ । यस वर्ष […]
एकल गजल गायनमा सन्तोष श्रेष्ठ
काठमाडौं,२ जेठ । सन्तोष श्रेष्ठ नेपाली सुगम सङ्गीतको क्षेत्रमा सर्वप्रिय नाम हो । लोक सङ्गीत हुँदै सुगम सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ केही वर्षदेखि संगीतको क्षेत्रमा अत्यन्त सक्रिय छन् ।सन्तोष श्रेष्ठद्वारा संगीतवद्ध तिमीले पराई ठानेपछि बोलको गीत डिजिटल संगीतको सीआरबीटीमा नेपाली गीतसंगीतको इतिहासमै सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुन सफल भयो । थुप्रै चर्चित गीतका संगीतकार श्रेष्ठ […]
इरफानसंग फिल्म नखेल्ने कंगनाको निर्णयपछि…….
काठमाडौं,३१ वैशाख । इरफान खान बलिउडका मात्रै नभई हलिउडमा समेत अभिनयको राम्रो छाप छोड्न सफल अभिनेता हुन् । रंगमञ्च हुँदै फिल्म अभिनयमा छिरेका इरफानसँग फिल्म खेल्न प्राय: सबै सहकर्मी कलाकार लालायित हुने गर्छन् । किनभने पैसाका लागि भन्दा पनि कामका लागि अभिनय गर्ने उनी हत्तपत्त नराम्रो स्क्रिप्टका लागि फिल्म खेल्न सहमति जनाउँदैनन् । तर यतिबेला […]
प्रियंका चोपडा अब भोजपुरी फिल्ममा
काठमाडौं,३० वैशाख । बलिउड हुँदै हलिउडसम्म आफ्नो चमक देखाइसकेकी नायिका प्रियंका चोपडा अब भने भारतकै सानो उद्योग भोजपुरीमा देखिने भएकी छन् । त्यसो त भोजपुरी फिल्ममा हाम्रा विराज भट्ट पनि गिन्तीकै नायकमा पर्छन् । प्रियंकाकी आमा मधुले छोरीले भोजपुरी फिल्म खेल्नेतर्फ संकेत गर्दै भनेकी छन्, ‘छोरीले कहिल्यै विशेष क्षेत्रका आधारमा नखेल्ने गर्दिनन् । यसअघि पनि […]
आमिरको भावी फिल्म ‘सेक्रेट सुपरस्टार’
बलिउड नायक आमिर खान यतिबेला चलचित्र ‘दंगाल’कै काममा व्यस्त छन् । यो चलचित्रमा उनी रेसलरको भूमिकामा देखिदैछन् । उनै आमिर एउटा चलचित्र नसकी अर्कोमा काम गर्दैनन् । आमिरले ‘दंगाल’ पछि गर्ने नयाँ चलचित्रको नाम सार्वजनिक भएको छ । उनले ‘सेक्रेट सुपरस्टार’ नामक चलचित्रमा काम गर्ने भारतीय मिडियाले खुलासा गरेका छन् । यो चलचित्रमा आमिरको मुख्य […]
नेपाली कला विष्वमा चिनिदै
काठमाडौं , १५ वैशाख । ताइवानको राजधानी ताइपेईमा अवस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको हल थ्रिमा पाँच दिनसम्म चलेको अन्तर्राष्ट्रिय कला मेलामा नेपाली युवा कलाकार उमेश साहका कलाकृति पनि छनौटमा परेका छन । विश्वभरिका ४०५८ कलाकृतिबाट छनौटमा परी ७३ देशका १०९ कलाकृति छानिएको र प्रदर्शनीमा राखिएको साहले बताए । सो मेला सकिएपछि सहभागी कलाकारलाई ‘इन्टनेशनल आर्टिष्ट ग्राण्ड प्राईज’ […]